July 2019 - Book News Madagascar
Tempoly anaty Rova – Hiavaka ny fanamarihana ny faha 150 taona niorenany
Hifanesy handalo eny amin’ny tempoly anaty Rova ireo Fiangonana samihafa eto Madagasikara. Fankalazana ny faha 150 taonan’ny Tempoly anaty Rova Nosokafana tamin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana­ ny asabotsy 20 jolay teo ny fankalazana ny faha 150 taonan’ny Tempoly anaty Rova. Tao amin’ity Tempoly ity no nanambaran’ny Mpanjaka tamin’izany vanim-potoana izany, Ranavalona II, Read more…
Olan’ny fananan-tany – Napetraka ny tetikasa Arofan
“Mahatratra 90% ny olana voaray dia mahakasika ny ady tany avokoa”, hoy i Aina Razafimamonjy, Tale jeneraly ao amin’ny Miralanja. Napetraka noho izany ny tetikasa Arofan. Tetikasa Arofan Nahazo vahana amin’izao ny ady tany eto Madagasikara. Ny antony dia tsy misoratra ara-dalàna amin’ny tompony ny tany. Eo ihany koa ny Read more…